ျမန္မာဆန္ဆန္ ၀တ္စုံေလး၀တ္ဆင္ထားၿပီး ခ်စ္စဖြယ္ ဟန္ပန္အမူအရာေလးေတြ နဲ႔ ၀င့္ယမုံႏိုင္ – Let Pan Daily
Mrtv-4ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားနဲ႔ ပရိသတ္ အားေပးမႈအမ်ားအျပားရရွိခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေနတဲ့သူေလးကေဝာာ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး ၀င့္ယမုံႏိုင္ျဖစ္ပါတယ္‌ေနာ္။သူမဟာ The sign of loveဇာတ္လမ္းတြဲတြင္ မာယာခ်ိဳအျဖစ္ပီျပင္စြာသ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သူမရဲ႕ထိမိလွတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္အားေပး၀န္းရံမႈ အျပည့္အ၀ ရရွိခဲ့တဲ့သူေလးပါေနာ္။
၀င့္ယမုံႏိုင္ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကြၽန္မက မေဟသီဇာတ္လမ္းတြဲဟာဆိုရင္လည္း လူႀကီးေရာ လူငယ္ေရာ အႀကိဳက္ေတြ႕ခဲ့ၾကတဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲ တစ္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး စံျမန္းအေနနဲ႔အေကာင္းဆုံးသ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယမုံဟာထား၀ယ္သူေလးတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ၿပီးေတာ့သူမရဲ႕ အလွဟာဆိုရင္လည္း အမ်ားနဲ႔မတူပဲထင္းထင္းေလး လွေသြးႂကြယ္ ေနတာပါေနာ္။
၀င့္ယမုံႏိုင္ဟာ သူမရဲ႕ခ်စ္စဖြယ္ ပုံရိပ္ေလးေတြ၊ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈပုံေလးေတြကို ပရိသတ္ေတြအတြက္ မွ်ေဝေပးေလ့ ရွိသူပါ။ မၾကာေသးမီကလည္း သူမရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ “အဂၤလိပ္လိုေျပာေသးတယ္ …. ခြင့္ျပဳပါ မိန္းကေလးရယ္သတဲ့ကြယ္” ဆိုတဲ့ captionေလးနဲ႔ ခ်စ္စဖြယ္ပုံရိပ္အမိုက္စားေလးေတြကို တင္ေပး လာပါတယ္။ ကဲ….ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေဝေပး လိုက္ပါတယ္ေနာ္။
Photo credit-Wint Yamone Naing’s Facebook page
မြန်မာဆန်ဆန် ၀တ်စုံလေး၀တ်ဆင်ထားပြီး ချစ်စဖွယ် ဟန်ပန်အမူအရာလေးတွေ နဲ့ ၀င့်ယမုံနိုင်
Mrtv-4ဇာတ်လမ်းတွဲများနဲ့ ပရိသတ် အားပေးမှုအများအပြားရရှိခဲ့ပြီး အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့သူလေးကဝောာ့ မင်းသမီးချောလေး ၀င့်ယမုံနိုင်ဖြစ်ပါတယ်‌နော်။သူမဟာ The sign of loveဇာတ်လမ်းတွဲတွင် မာယာချိုအဖြစ်ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး သူမရဲ့ထိမိလှတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ပရိသတ်အားပေး၀န်းရံမှု အပြည့်အ၀ ရရှိခဲ့တဲ့သူလေးပါနော်။
၀င့်ယမုံနိုင်ပါ၀င်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မက မဟေသီဇာတ်လမ်းတွဲဟာဆိုရင်လည်း လူကြီးရော လူငယ်ရော အကြိုက်တွေ့ခဲ့ကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး စံမြန်းအနေနဲ့အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယမုံဟာထား၀ယ်သူလေးတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့ အလှဟာဆိုရင်လည်း အများနဲ့မတူပဲထင်းထင်းလေး လှသွေးကြွယ် နေတာပါနော်။
၀င့်ယမုံနိုင်ဟာ သူမရဲ့ချစ်စဖွယ် ပုံရိပ်လေးတွေ၊ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုပုံလေးတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေပေးလေ့ ရှိသူပါ။ မကြာသေးမီကလည်း သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွင် “အင်္ဂလိပ်လိုပြောသေးတယ် …. ခွင့်ပြုပါ မိန်းကလေးရယ်သတဲ့ကွယ်” ဆိုတဲ့ captionလေးနဲ့ ချစ်စဖွယ်ပုံရိပ်အမိုက်စားလေးတွေကို တင်ပေး လာပါတယ်။ ကဲ….ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
ရင်ခုန်သံတွေ မြန်ဆန်သွား ရလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှု နေတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး ရဲ့ အမိုက်စား VIDEO လေး
ရင်ခုန်သံ ရပ်တန့်သွားစေမယ့် မတ်မတ်သင်ဇာ ရဲ့ အကြမ်းစား ဗီဒီယို